အမျိုးဘာသာ ကိုထိန်းသိမ်းကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » အမျိုးဘာသာ ကိုထိန်းသိမ်းကြပါ
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 30, 2011 in Think Tank |6comments
ကျနော်ဒီနေ. အလုပ်ကိုရောက်ပြီး ဆိုင်ဖွင်. ကွန်ပျူတာလေးတွေလိုက်ပြီးဖွင်. မနက်ပိုင်း တရားအခွေလေးဖွင်.ပေါ.
နောက်ပြီး ကွန်ပျူတာလေးတွေ လိုက်စစ်စရာရှိတာလေးတွေစစ်ဆေးပေါ. ဆိုင်ဖွင်.ပြီး မကြာသေးဘူး သားအမိ နှစ်ယောက် ဆိုင်ထဲဝင်လာတယ်
အန်တီ စက်သုံးမလို.လားလို. မေးပေါ. စက်တော.သုံးမယ်သား ဒါပေမဲ. အန်တီတို.သားအမိက အင်တာနက်မသုံးတတ်ဘူးတဲ. ရှာစရာလေးရှိလို.ပါတဲ.
သားများတစ်ချက်ဝိုင်းကူရှာပေးလို.ရလားတဲ. ကျနော်လည်း ရပါတယ်အန်တီ ဘာများရှာချင်လို.လည်းပေါ. စက်သုံးတဲ.လူလည်းသိပ်မရှိသေးတော. ရပါတယ်ပေါ.
စက်ထိုင်ပြီး ဘာရှာမလဲအန်တီ ဘာအကြောင်းများသိချင်လို.လည်းဆိုတော. အန်တီသမီး ကျောင်းကရှာခိုင်းလို.ပါသားရယ် ကမ္ဘာ.နိုဘယ် ဆုရှင်တွေ ၇ ယောက်လောက် ရှာပေးစမ်းပါတဲ.
ကျနော်လည်း ရပါတယ်အန်တီ ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး Google ကနေရှာပေးလိုက်တာပေါ. ကျလာပါပြီ အန်တီ ဘယ်သူတွေရဲ.ပုံတွေများ ယူမလဲဆိုတော. သမီးပြောလိုက်လေ
ဘယ်ပုံယူမလဲဆိုတော. နိုင်ငံခြားကလူဖြူ နိုဘယ်ဆုရှင်တွေပဲ ယူမယ်ပဲပြောနေတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယူပေါ. ညီမ သူကမှ ကိုယ်.နိုင်ငံကဆုရှင်ပဲဟာတစ်ခြားဟာတွေကမှ
သူများနိုင်ငံသားတွေကျောင်းရောက်ရင် ကိုယ်.နိုင်ငံသားဆုရှင် ရှိတာကို သူများနိုင်ငံသားတွေယူလာတယ်ဆိုပြီး ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော.တော်ပြီ မယူရဲဘူးတဲ.ဗျာ ကောင်းရော
Mahatma Gandhi ပုံယူမလားဆိုတော.လည်း ကုလားကြီးမို.တဲ.ကျနော်လည်းညီမလေး အာရှရဲ. ပထမဆုံး နိုဘယ် ဆုရှင် Rabindranath Tagore ပုံယူမလားဆိုတော.
မယူချင်ဘူးတဲ. အရုပ်ဆိုးလို.တဲ. နောက် Nelson Mandela ဆိုတော.လည်း အသားမည်းလို.တဲ. ကောင်းရော ကျနော်လည်း သိပ်စိတ်ကမရှည်ချင်တော.ဘူး သူ.အမေကလည်း
ဒေါ်စုပုံတော. မထည်.ပါနဲ.ဟယ် တော်ကြာ အမှတ်မရပဲ ပြုတ်နေပါအုံးမယ်တဲ.ကောင်းရော သားမိနှစ်ယောက် အတိုင်အဖောက်ကို ညီနေတာပဲ ကောင်မလေးက ကျနော်.ထင်တာပေါ.
၈ တန်းလောက်ထင်တယ် ဘယ်ကျောင်းတက်နေတာလည်းတော. မသိဘူး မေးလည်းမမေးကြည်.မိဘူး ပြီးတော. Print ထုတ်ပြီး ယူသွားတယ် ကျနော်လည်း
တော်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် မိဘကလည်း ဘာမှပြောမပြ သမီးဖြစ်သူကလည်း ဒေါ်စုနဲ. နည်းနည်းပတ်သတ်တာနဲ. ထောင်ကျမယ်ထင်နေတာ
ဘယ်နှယ်.ဗျာ ကိုယ်.နိုင်ငံက ရှားရှားပါးပါး ဒီတစ်ယောက် နိုဘယ်ဆုရှင် ရှိပါတယ် မထည်.ရဲဘူးတဲ. ကောင်းရော လူငယ်လေးတွေတစ်ချို. အဲလိုနိုင်ငံ ရေးနဲ.နည်းနည်းပတ်သတ်လာရင်
တော်တော်ကြောက်တတ်တယ် အခုလိုပေါ.ဗျာ ဒါကဘာကြောက်စရာရှိလို.လည်း သူတို.ခိုင်းတဲ. နိုဘယ် ဆုရှင်ပဲ မဟုတ်တာယူလာတာမှ မဟုတ်တာ မိဘကလည်း နားချမလား
အောက်မေ.မိပါရဲ. အမှတ်ပြုတ်မှာ စိုးလို.တဲ. ကောင်းရော တော်တော်ကို ဒေါသဖြစ်ဖို.ကောင်းတယ် ကျနော်တို.နိုင်ငံကလူငယ်တွေ ဒီလိုတွေလုပ်ရင် ထောင်ကျမှာပါလား လို.ဘာ.လို.
စိတ်ထဲစွဲနေရတာလည်း ဒီအဖြေက မိဘတွေနဲ.ပဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ် မိဘတွေ သေသေချာချာနားလည်အောင် ရှင်းမပြတာ မပတ်သတ်နဲ. ထောင်ကျလိမ်.မယ် ဒိလိုပဲ ဆုံးမနေကြလို.ထင်တယ်
အာဇာနည် နေ.ကလည်းအငှားဖုန်းဆိုင်မှာ ဖုန်းဝင်ပြောတော.ကြုံခဲ.ရတာလေးပြောရအုံမယ် ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက် သွားအလေးပြုမလို. လိုက်ခဲ.တဲ.
သမီးကဘာပြောတယ်မှတ်လည်း အဖေကလည်း ထောင်ကျမှာပေါ.တဲ. ဖခင်ဖြစ်သူက သေသေချာချာရှင်းပြတယ် သမီး ဒါကကြောက်ရမဲ. ဟာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကသူတို.ကို ဆန်.ကျင်တာ
မဟုတ်ဘူး ကိုယ်.နိုင်ငံကို သူ.ကျွန်ဘ၀က လွတ်အောင်အသက်စွန်.လုပ်ဆောင်ပေးတဲ. ဗိုလ်ချုပ်ကို အလေးပြုတာဆိုတော.မှ သမီးဖြစ်သူကနားဝင်ပြီး လိုက်မယ်ပြောတော.တာ
အဲဒီတုန်းကတော. တော်တော်လေးကို ကျေနပ်ခဲ.ရတယ် မိဘတိုင်းက အခုလိုသေသေချာချာရှင်းပြရင်ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိမ်.မလဲလို. တွေးမိတယ်
ဒီနေ.ကျနော် ပြောတဲ. အမေမျိုးကျတော. တာဝန်မကျေသလို ဖြစ်နေတယ်လို.ထင်တယ် သူလည်း သူ.သမီးအပေါ်ချစ်တာနဲ. အမှတ်ပြုတ်မှာစိုလို.ပြောတာကျနောလက်ခံတယ်
အခုဟာကျတော. အန်တီစုပုံ ထည်.သင်.တယ်လို. ကျနော်ထင်တယ် ကျနော်သာဆို သေချာပေါက်ထည်.သွားမှာ သူတို.ပြန်သွားပြီး တော်တော်ကိုဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျာ
ကိုယ်.လူမျိုးကျတော. ချောင်ထိုးထားသလို ဖြစ်နေတယ် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ထောက်ခံလို. နိုဘယ်ဆုပေးထားတယ် ကိုယ်.လူမျိုးအချင်းချင်းက ချောင်ထိုးလိုက်တယ်
တော်တော်ကိုဝမ်းနည်းဖို.ကောင်းတယ် အဲလို မိဘတွေ ဘယ်လောက်တောင်များ ရှိမလဲမသိဘူးနော် တွေးကြည်.ရင်တော. ၀မ်းနည်းစရာတွေပဲ
ကိုယ်ကောင်းဖို.ပဲ ကြည်.တယ် အမှန်ကိုလက်မခံတဲ. ကျောင်းသူလေးကိုလည်း တော်တော်သနားမိတယ် မိဘကလည်း ဘာမှမပြောဘူး တော်တော်ရင်လေးဖို.ကောင်းတယ်
ဒီကလေးမလေးတွေက ယနေ.လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး ဖြစ်လာမဲ.မျိုးဆက်တွေ သူတို.ကအခုကတည်းက ဒီလိုစ်ိတ်ဓာတ်တွေကို မိဘကရိုက်သွင်းပေးသလို ဖြစ်နေတယ်လို.
ကျနော်ထင်တယ် ကိုယ်.လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုရင် အထင်သေးတတ်တဲ. ကျနော်တို. လူမျိုးတစ်ချို. သူများလူမျိုးမှ အထင်ကြီးတတ်တဲ. ကျနော်တို.လူမျိုးတစ်ချို.အတွက်
တောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ပုံကို ဦးဆောင်တဲ. ဆရာစံ ကြိုးမိန်. ပေးတော. ကြိုးစင် ပေါ်တက်ခါနီး ပြောသွားတာလေး ပြောရအုံးမယ်
“အမျိုးဘာသာ သာသနာ ပညာ ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်း ဆောင်ရွက်လို. အခုလိုကြုံရတာပဲ သုခလို့ မှတ်ပါတယ်ဆို ဖယ်ပေးကြ ငါ.ဟာငါ တက်မယ်”
ဆိုပြီး ချုပ်ကိုင်ထားတဲ. နှစ်ယောက်ကို တွန်းထုတ်လိုက်တယ် ကြိုးမိန်.ပေးခါနီး ဆုတောင်းသွားသေးတယ် နောင်ဘ၀ဆက်တိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်ကို အနိုင်ရတဲ.သူ ဖြစ်ရပါလို.၏ ဆိုပြီး
ကြိုးမိန်.ပေးခံလိုက်တယ် ဆရာစံပြောသွားတာ ဘယ်လောက်အတုယူ ဂုဏ်ယူဖို.ကောင်းလဲ အခုခေတ်က ကျနော်တို. လူမျိုးတစ်ချို.နဲ.ဆို စိတ်ဓာတ်က ဆန်.ကျင်ဖက်ဖြစ်နေတာနော်
ကိုယ်.လူမျိုး အတွက်လုပ်ရင်း ဖြစ်တာမို. သုခလို.မှတ်တယ်တဲ. အခုများကြတော. ဆရာစံလို သေရေးရှင်ရေးတောင် မဟုတ်ဘူးနော် အမှတ်လေး လျှော.ခံရမှာကို
သေမလောက်ကြောက်နေတာ တော်တော်ဝမ်းနည်းဖို.ကောင်းတယ် မိဘတွေကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ကိုယ်.သားသမီးကို ချစ်ရာကနေ နှစ်ရာမရောက်ပါစေနဲ.လို.ပြောချင်ပါတယ်
ချစ်တာနဲ. နှစ်တာ သတ်သတ်စီပါ စောစောက သားအမိကျတော. ချစ်သလိုနဲ.နှစ်သလို ဖြစ်နေပါပြီ ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာရင်ပြီးရောဆိုတဲ. စိတ်ဓာတ် အဲဒီ ကျောင်းသူလေးမှာ ရှိနေအော်မိဘက မပြောသလိုဖြစ်နေတာပါ အတ္တစိတ်တွေ ဖြစ်နေတာပါ ငါအမှတ်ရပြီးရောဖြစ်နေတာ မိဘကလည်း မဆုံးမ မပြောပြပဲ လိုက်လျောပေးတော့
ပိုးဆိုပြီပေါ.ဗျာ နောင်ဝယ် လူကြီး ဖြစ်မဲ.လူငယ်တွေကို လူပဲကြီးပြီး အသိဥာဏ်မကြီး တဲ.သူဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ.လို. တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
ရေးလက်စနဲ. ဆက်ပြောရအုံးမယ် ကျနော်တို. မြန်မာ မတစ်ချို. မွတ်တွေနဲ.ဘာသာခြားနဲ. အိမ်ထောင်ပြုတာ တို. ချစ်သူဖြစ်နေတာတို. ကျနော် နေ.တိုင်းတွေ.နေရတယ်
တွေ.တိုင်းလည်း ကိုယ်.ညီမ အစ်မဆို တကယ်ကိုပါးရိုက်ချင်တယ် ဘယ်.နှယ်ဗျာ မြန်မာလူငယ်တွေ ဒီလောက်ပေါတာ ဘာသာခြားမှ ကြိုက်ရတယ်လို. တော်တော်ကို ရှက်စရာကောင်းတယ်
ပြီးရင် သူတို.ဖာသာယူချင်လို.ယူပြီး ဘာသာပြောင်းခိုင်းတော. မပြောင်ချင်ကြဘူး အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲတယ် နောက်ဆုံးတော.လည်း ဆူးပေါ်ဖက်ကျလည်း ဖက်ပေါက်တယ်
ဖက်ပေါ်ဆူးကျလည်း ဖက်ပဲပေါက်တာပါပဲ ကိုယ်ကမိန်းကလေးဆိုတော. အစစအရာရာ စဉ်းစားပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုကြပါ ဘာသာခြားနဲ.ဆို ဖြစ်နိုင်ရင် မပြုစေချင်ဘူး
ကိုယ်.လူမျိုးနဲ.ယူတာကမှ မြတ်ပါသေးတယ်ဗျာ ကျနော်ဆို နေ.တိုင်းတွေ.နေရတယ် အလုပ်ထဲမှာလည်း တွေ.ရတယ် ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း တွေ.ရတယ်
မြန်မာမိန်းကလေးက ကုလားကိုယူထားတာပါ ဘာသာပြောင်းခိုင်း တယ် အမြဲ ကုလားမိသားစုက အနိုင်ကျင်.တယ် ဘုရားတောင် ပုန်းကွယ်ပြီး ရှိခိုးရတာတဲ. ဘယ်လောက်အဖြစ်ဆိုးလည်း
ကျနော်ကပဲ ကုလားတွေကို မုန်းနေလို.လားတော.မသိဘူး အကောင်းကိုမြင်လို.မရတာကိုမရတာ အဲဒီအစ်မကြီးကိုလည်း တော်တော်သနားတယ် ဒါပေမဲ.လည်း သူကြိုက်လို.ယူတာပဲ
ကိုယ်ခင်းတဲ.ဇာတ် ကိုယ်ပဲနိုင်အောင် ကရုံပဲ ရှိတာပေါ. ဘာမှလုပ်လို.မရဘူလေ
အဲဒီလို ဘာသာခြားနဲ. အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ. မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ချို.ကိုမြင်တိုင်း ကျန်စစ်သား မင်းကြီး ကိုလေးစားမိတယ်
ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ. မြေးတော် ရွှေအိမ်စည် က ပဋိက္ကရား ကုလားမင်းသားနဲ. ရည်ငံနေတာသိတော. ကုလားပြည်ဖြစ်မှာကို တွေးပြီး စောလူးမင်းသား ဒုက္ခိတ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ.
သူနဲ.ပေးစားလိုက်တာတဲ. ဘယ်လောက် အမျိုးကိုချစ်သလဲဆိုတာ ကြည်.ရုံနဲ. သိနိုင်တယ်နော် ကုလားနဲ.ပေးစားမယ်.အတူတူ ကိုယ်.လူမျိုးနဲ.ယူတာကမှ
မြတ်သေးတယ်လို.လည်းမိန်.သေးတယ် အခုခေတ်လိုဆိုရင်တော. ဘော.စ်လေးတွေနဲ.ပဲ လူမျိုးခြားရုံမကလို.
အသက်က သားအဖ လောက်ကွာနေပါစေ ပေးစားလိုက်တဲ. မိဘတွေကို ကျန်စစ်သားမင်းကြီး သာရှိလို.ကတော. သေချာပေါက် သတ်မိန်.ပေးမှာလို.ထင်တယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် ကုလားတွေနဲ. မယူစေချင်ဘူးဗျ ကုလားဆိုင်တောင် ဈေးမ၀ယ်ကြနဲ.ဗျာ ကျနော်ကတော. ဘယ်တုန်းကမှလည်း မ၀ယ်ဖူးဘူး
ဆရာတော် တစ်ပါး သူ.ကျောင်းက ကိုရင်လေးတွေကိုဆုံးမသလိုပဲ
“ကိုယ်တော် တို.ကသာ ကုလားတွေဆိုင်ဝယ်ကြတာ အဲဒီကုလားတွေက ကိုယ်တော်တို.ကို ဆွမ်းတစ်ခါလောင်းဖူးလို.လားတဲ့”
ကိုယ်ဝယ်လိုက်လို. ကုလားကအမြတ်ငွေရသွားမယ် အဲဒီအမြတ်က ခဗျတို.ကျုပ်တို.ရဲ. ဘုန်းကြီးတွေဆီ ဆွမ်းအဖြစ်ဘယ်တော.မှ မရောက်ဖူးဗျ
အဲဒါကြောင်. ကျနော်ကတော. ဘယ်တော.မှ ကုလားတွေဆိုင် အားမပေးဖူးဘူး အဲဒီလို ဂွကျလို.လည်း ကျနော် ဈေးဝယ်တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ. အမြဲ စကားများရတယ် ငြင်းခုန်ရတယ်ဗျ
ချွင်းချက်အနေနဲ. တရုတ်တွေကမှ ဘုန်းကြီး တွေကိုဆွမ်းလောင်းသေးတယ် အကောင်းဆုံးကတော. ကိုယ်.လူမျိုးဆိုင်ပဲ အားပေးကြပါ
ဆူးလေ ဘက်ရောက်၇င်လည်း တော်တော်ကို စိတ်ထိခိုက်တဲ.မြင်ကွင်းလေး သွားတိုင်းတွေ.ရတယ်ဗျ
ဘာလည်းဆိုတော. Pacific (PCI)ဓာတ်ပုံတိုက်မှာဆို အမြဲလူကျနေတယ် အဲဒါကုလားဆိုင် ဘေးနားက Sweety ဆိုတဲ. မြန်မာဆိုင်ကျတော. ဆရာတော်တစ်ချို.နဲ. ကျနော်တို. လူမျိုး
တစ်ချို.သာတွေ.ရတာ တော်တော်လည်း စိတ်မသက်သာဖြစ်ရတယ်ဗျ ဒါကလည်းကျနော်. အမြင်ကို ပြောပြတာပါ အဲဒီဆိုင်က ဈေးသက်သာလို.လား အရည်သွေးကောင်းလို.လားတော.
ကျနော်လည်းမသိပါဘူး အဲဒီဆိုင် တစ်ခါမှလည်း မကူးဖူးလို.ပါ ဘေးနားက မြန်မာဆိုင်လေးတွေသာ အမြဲကူးနေကျမို.ပါ
ကျနော်ကြုံတုန်းပြောလိုက်အုံမယ် ကျနော်ထင်တာတော. အရည်သွေး တူလောက်ပါတယ် ဘေးနားက မြန်မာဆိုင်လေးတွေလည်း ကောင်းပါတယ်လို. ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်
ဟိုကုလားဆိုင်က ခန်.ခန်.ညားညား ဆိုင်ကြီး မို.များသွားကြတာလားတော. မသိဘူး ကျနော်တို. လူမျိုးတစ်ချို.က အဲလိုဆိုသိပ်မထင်ကြီးတတ်လို.ပြောတာပါ
အမျိုးကိုထိန်းသိမ်းတဲ.နေရာမှ အဓိက နေရာကတော. မိန်းကလေးတွေလို. ကျနော်ထင်တယ်ဗျာ ဒါ.ကြောင်.ကျနော်တို. မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ချို. အိမ်ထောင်ပြုရင် ဘာသာတူနဲ.ပဲ
ကြုံတွေ.ခဲ.ရတာလေးကို တွေးမိသလောက် သိသလောက်လေးနဲ. ရေးပြီး ပို.စ်တင်လိုက်တာပါ
လိုတာရှိရင်လည်း အကြံပြုကြပေါ. ရွာသားတို. ရွာရဲ.စည်းကမ်းဖြစ်တဲ. လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာတော. မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ထင်တာကိုယ်ရေးတာပါ
အင်…ကောင်းပါတယ်ရွှေဘိုသာရယ် ကိုယ့်လူမျိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုအားပေးသင့်ပါတယ် ဆက်ရေးပါ အားပေးနေပါတယ်…
အထက်တန်း မှာ တော့ မသိဘူး ၊ တက္ကသိုလ်တွေမှာတော့ စာတမ်းပြုစုတဲ့အခါ အစိုးရနဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက် လူ၊ အဖွဲ့ အစည်း ၊ စသည် တို့ ရဲ့ အချက်အလက် ကို လက်မခံဘူး။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ လက်မခံပါဘူး။
မိန်းမ ယောက်ျား ယူကြ/လက်ထပ်ကြရင် ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူ၊ အဆင့်တူ၊ ပညာတူ ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတူ ရင်တော့ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ မတူတာ ရှိပေမဲ့ ယူကြမယ်ရင်တော့ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ လူလဲဆိုတာတော့ လေ့လာသင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နယ် မှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနဲ့ ၊ တရုပ် အနွယ် တွေများတယ်။ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်လူမျိုးကို ယူဖို့ကြည့်တော့လဲ ကိုယ့်လူမျိုးထဲ က လူငယ်တွေက အရည်အချင်း မရှိ ပျက်စီးကြတာများတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ် တွေကြတော့လဲ ရန်ကုန်လို ၊ မန္တလေးလို မြို့ ကြီးမှာပဲ နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မြို့ က မိန်းကလေးတွေက လူမျိုးခြားရွေးချယ်တာတွေ ပိုများတယ်။ ကောင်းတာနဲ့ တွေ့ သလို မကောင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ ကြတာ အများကြီးပဲ။
ပစ္စည်းတစ်ခုခု ၀ယ်ရင် လူမျိုးခြားမှာ အားပေးကြတာက ၊ ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ပြောရရင်၊ ဗမာ လူမျိုး ရောင်းတဲ့ဆိုင် ထက်စာ ရင် ကုလား ဆိုင်က ပို ပြီးဖော်ေ၇ွ တယ်၊ ဖောက်သည် ကို ဂရုတစိုက်ရှိတာများတယ်။ ဆိုင်တိုင်းတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ လူတွေ အတွက်ကြတော့ လူမျိုးခြား ဆိုတာထက် အဆင်ပြေ တာကို ပိုအလေးထားရင် အဆင်ပြေတဲ့ နေရာ မှာပဲ သွားဝယ်မှာပဲ။
ကိုယ့် အမျိုးတွေကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ…
သူတို့၏ စီးပွားရေးကို အားပေးတာသည် လည်း အပါအ၀င်ပါ..
သတိမမူ ဂူမမြင်ဆိုသလို သတိထားဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းပါ၊..*..
စကားမစပ် ပြောချင်တာလေး တစ်ခု ရှိသဗျာ
အခု ကွန်မင့် ကို သူကြီး က သေချာပေါက် ဖျက်မှာ ကို လည်း သိနေမိတယ်
အခု ခေတ်တော့ မရှိတော့ပါဘူး
ပြီးခဲ့တဲ့ 2000 ခုနှစ်လောက်အထိ ရှိခဲ့ဖူးတယ် ဗျ
ဘာသာ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ။
သူ တို့ ဘာသာ ရဲ့ ဝတ်ကျောင်း ကို က ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ရှိတယ်
ယနေ့ ထိ ရှိရင်လဲ ရှိမှာပေါ့ နော်
မြန်မာမာ ( ဗမာမ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ တစ်ယောက် ကို ရအောင်ယူနိုင်ရင် သူတို့ ဘာသာ ၀တ်ကျောင်းက စပွန်ဆာ ပေးတယ် ဆိုပဲ )
အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ ၊ တောရွာမှ မြို့ တက်လာပြီး ခေါင်းရွက်ဈေးသည် လေးများ ခဗျာ ၊ သူ တို့ တတွေ ရဲ့ သားကောင် ဖြစ်ကြရရှာပါတယ် ။ ဒါကို ဒီဂေဇက်ဝင်တွေ နဲ့ စာဖတ်သူတွေ လည်း သိကြမှာပါ ။ သိပြီးသား အကြောင်းအရာ ကို ရေးမိခဲ့သလို ဖြစ်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်နော်
ကျုပ်ကတော့ ကုလားနဲ့ယူမဲ့ ယူတဲ့မြန်မာမတွေကို သူတို့လင်ယောက်ျားကုလားတွေထက် မသာတောင် တန်းတူရည်တူ အတွေးအခေါ်ရှိ၊ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် မာန်ရှိပြီး ကုလားတွေလိုပဲ ကိုယ့်အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်တတ်သူတွေ၊ နာရကောင်းမှန်းသိသူတွေ၊ ခေါင်းငုံ့မခံတတ်သူတွေ၊ ကိုယ့်ဘဝ ကောင်းစွာကျောင်းတတ်သူတွေ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲအတွက် ကာယကံရှင် မြန်မာမများမှာသာ မဟုတ် မြန်မာထီးများ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝန်းတို့မှာလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ နားလည်စာနာ ကူညီထောက်ပံ့ ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နောင်လာမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံနေမယ့် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရှင်သန်ကြီးပွားနိုင်မှာပါ…။